Dingana fito mankany amin'ny tantara tonga lafatra | Martech Zone
Dingana fito mankany amin'ny tantara tonga lafatra
Alarobia, Desambra 11, 2013 Douglas Karr
Ny ankamaroan'ny varotra sy fivarotana dia mihaino ny mpihaino anao amin'ny ambaratonga mampihetsi-po. Ny fitantarana tantara dia ivon'ny famaritana ny vokatrao na serivisinao. Ny fifampiresahana momba ny fiasa sy ny tombontsoa dia tsara sy tsara avokoa, fa raha tsy misy olona mahatsapa fa mamaha olana toa azy ireo ianao, dia efa hatry ny ela ny fahafahan'izy ireo matoky anao ampy hanovana.
Ny fitantarana tantara dia endrika zavakanto - na dia mizara anecographe fotsiny amin'ny mpihaino anao. Ny fahaizana mandrafitra ny Tantara amin'ny lahatsoratra bilaogy na horonan-tsary fohy aza dia mila fotokevitra vitsivitsy. The Fikambanan'ny Marketing amin'ny atiny dia nametraka an'ity sary ity mba hanampiana anao handrafitra ny tantaranao manaraka. Ataovy anio!
Manomboka amin'ny firafitra sy tetika ka hatrany amin'ny mahery fo sy ny endri-tsoratra, ny tantaranao dia tsy maintsy apetraka amin'ny toerany raha te hifandray amin'ny mpamaky. Araho ny tari-dalanay amin'ny fahombiazan'ny fitantarana.
Tags: cmafikambanan'ny marketing amin'ny atinytetikafitantarana tantarafitantarana